Ligy fanatanjahantena 10 manankarena indrindra eran-tany 2022 - Victor Mochere
Manana anjara toerana lehibe eo amin’ny fiainantsika ny fanatanjahantena. Hatramin'ny taona fahazazana izay iraisantsika ho zava-dehibe ny fanatanjahan-tena ka hatramin'ny taona faramparany eo amin'ny fiainana izay heverintsika ho fialamboly, fombafomba ara-batana, ary asa mihitsy aza indraindray. Fa ho an'ny mpanatanteraka ara-panatanjahantena, ny ligy ara-panatanjahantena mahasoa indrindra dia orinasa mahasoa indrindra. Ny ekipan'ny fanatanjahantena matetika dia an'ny miliaridera izay mampiasa vola be amin'ny mpilalao vaovao, kianja sy kianja vaovao ary fitantanana marika. Betsaka ny mpankafy fanatanjahantena no tsy miraharaha ny zava-misy fa ny ekipa malalany dia orinasa lehibe indrindra.
Ny fanatanjahantena ara-panatanjahantena dia voaporofo fa sampana tena mahasoa amin'ny indostrian'ny fialamboly. Mahazo vola tsy mampino izy ireo. Amin'izao fotoana izao, ny ligy ara-panatanjahantena matihanina dia lasa iray amin'ireo indostrian'ny fialam-boly mahasoa indrindra eran-tany, mahazo vola an'arivony tapitrisa dolara avy amin'ny loharano samihafa. Ireto loharano ireto dia ahitana; fanohanana, fivarotana tapakila, hetsika, famindrana, fanofana kianja, fifanarahana fampielezam-peo, entana, filokana, sy ny maro hafa.
Ireto ny ligy fanatanjahantena 10 manankarena indrindra eran-tany.
$ 16 lavitrisa
Baseball an'ny ligy lehibe (MLB)
$ 10 lavitrisa
Fikambanan'ny basikety nasionaly (NBA)
$ 8 lavitrisa
Ligy Premier India (IPL)
$ 7 lavitrisa
Ligue Premier English (EPL)
$ 5.3 lavitrisa
$ 4.8 lavitrisa
$ 4.5 lavitrisa
$ 4.3 lavitrisa
$ 2.3 lavitrisa
Ligin'ny Tompondakan'i UEFA (UCL)
$ 2 lavitrisa
Ahoana no hanombohana orinasa mampiaraka amin'ny Internet